Adobe Photoshop एक धेरै शक्तिशाली छ छवि सम्पादक। यसको मद्दतले तस्बिरहरू सम्बन्धित धेरै समस्या समाधान गर्न। र आज हामी "Photoshop" पाठ सजाउनु जाँदैछन्। हामी मुख्य सुविधा र उपकरण लेबल को उपस्थिति परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ हेर्न।
पहिलो, का "Photoshop" पाठ कसरी थप्न बाहिर आंकडा गरौं। यसो गर्न हामीलाई मदत गर्नेछ भन्ने एक उपकरण "तेर्सो प्रकार" (सर्टकट टी) भनिन्छ। तसर्थ, कुनै खास फन्ट, रंग र आकार छानेर, तपाईंलाई द्रुत लेखिएको थप्न सक्नुहुन्छ। पाठ परिवर्तन गर्न, तपाईं Photoshop मा विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिल्टर र blending विकल्पहरू यी दुई उत्पादनहरु सजाने पाठ को लागि आदर्श हुन्, सबै भन्दा सामान्यतः प्रयोग गरिन्छ। केही अवस्थामा यो सम्भव पाठ चारै ओर बनाउन जो धेरै उपयोगी 3D पत्रहरू, साबित। "Photoshop" यो मौका कार्यक्रम को नवीनतम संस्करण मा आए। अर्को, हामी व्यक्तिगत यी उपकरण प्रत्येक छलफल गरिनेछ।
को "Photoshop" पाठ कुनै पनि रूपमा recruited हुन सक्छ, पाठ सम्पादक। तर कुनै साधारण सम्पादक तपाईं लेखिएको परिवर्तन गर्न अनुमति छैन। कार्यक्रम "Photoshop" को मानक सेट पाठ परिवर्तन गर्न पर्याप्त सेट प्रदान गरिएको छ। सोही, फिल्टर आत्म-स्थापित हुन सक्छ, तपाईंको कम्प्युटरको पूर्व-डाउनलोड। लाइन गर्न फिल्टर लागू गर्न, तपाईं ट्याब कार्यक्रम माथिल्लो प्यानल को "फिल्टर" चयन गर्नुहोस् र रोचक प्रभाव छनोट अप गर्नु पर्छ। धेरै रोचक संयोजन "धमिलो" वा लहर विकृति को वाहेक प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। तपाईं विभिन्न मापदण्डहरु र फिल्टर मान संग परीक्षण गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
तपाईं खाली गर्न वा आगो पाठ चाहनुहुन्छ? मा "Photoshop" यस्तै प्रभाव, यसलाई blending विकल्प प्रयोग गर्न सही छ भने लागू गर्न सकिन्छ। तह तिनीहरूलाई सूची हेर्न, तपाईँले छ दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र चयन "Blending विकल्प।" यहाँ तपाईँले यस्तो छाया, चमक, भित्री चमक, चमक, ढाँचा, आदि रूपमा सेटिङहरू पाउनुहुनेछ ती सबै तपाईंले एक रंगीन तस्वीर प्रस्तुत गर्न आफ्नो पाठ परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ। विकल्पहरू एक विशाल चयन तपाईं लचीलापन को प्रभाव अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
केही मानिसहरू अझै पनि आफ्नो मूल्य थाह छैन को आतंक, वर्णहरू संयोजन हेर्नुहोस्। तर यति धेरै चिन्ता छैन। 3D - छुट्टै कम्प्युटर ग्राफिक्स विभाजन, जहाँ सबै तत्व तीन आयोमी आकार हो। सबै तपाईं एक सपाट ठाउँ मा हेर्न भनेर, 2D भनिन्छ। यी परिभाषाहरू मात्र कम्प्युटर ग्राफिक्स को सन्दर्भ मा लागू टिप्पण लायक छ। Photoshop मा 3D चित्र काम गर्न सक्ने क्षमता देखि संस्करण CS4 देखियो। तीन-आयामी तस्बिरहरू झन् डिजाइन प्रयोग गरिन्छ र यसलाई आफ्नो लुकेको सुविधाहरू एक प्रकटीकरण हुन सक्छ जो पूर्णतया नयाँ संरचना छ रूपमा, फरक लोगो सिर्जना गर्न।
तपाईं Photoshop मात्र पारंपरिक छवि र फोटो लागि स्थापित छ कि लाग्छ भने, तपाईंले गहिरो गलत छन्। सबै पछि, "Photoshop" पाठ फरक सेटिङहरू र विकल्पहरू धेरै छन्। एकल 3D परियोजना रूपमा सामान्य सम्पादक लेखिएको विचार गर्न मौका संग विशेष खुसी। तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा Photoshop सफ्टवेयर स्थापना यदि तपाईं स्वतन्त्र यस प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।
शब्द मा रोमन कसरी छाप्न
घर मा स्वादिष्ट र स्वस्थ रक्सी "Isabella"
"Rimantadine" र "Rimantadine" - फरक के? विवरण तयारी निर्देश पुस्तिका
समूह "टोक्यो होटल": इतिहास, रचना, हिट
दृश्य विश्लेषण: "स्वच्छ सोमवार", Bunin आई ए
Kremlin रेजिमेन्ट - यो कुलीन को कुलीन!
डिम्बाशय Cysts: लक्षण र उपचार